SiyiNkampani yoLawulo lweNdawo ekubonelela ngayo zonke iinkonzo zoncedo eKorea zangaphandle. Ilungu leqela lethu libunjwe ngabadlali abancinci nabomeleleyo abanobuchule abaye basebenza, ngaphandle imbali yabo emfutshane, imicimbi eyahlukeneyo kunye nemisebenzi. Sithathe inxaxheba kwi-fairs ezahlukeneyo zokuhamba kwihlabathi lonke kwaye sinobudlelwane obuhle kunye namaqabane ethu asekuhlaleni kumazwe angaphezu kwe-50.
Sigxininisa ngakumbi kwiinkonzo zabahambi abangamaSilamsi, etsala iKorea kungekuphela abahambi boMbindi Mpuma kodwa nabahambi abangamaSilamsi abavela eAsia.
Ukondliwa kuya kuqhubeka nokuba ngumnxibelelanisi ohamba ngobuchule kunye nobubele kwixa elizayo. Siza kwenza wonke umzamo ofunekayo ukuzisa umfanekiso weKorea kwihlabathi ngokutsala abantu bamanye amazwe abangakumbi ngenkonzo engcono.
Ukulondolozwa kohlobo lomntu ngohambo
Economic Inkqubo yabakhenkethi esemgangathweni olungileyo
Okuvuyisayo Inkqubo yotyelelo ngomoya wokuyila
Iyonwabisa Inkqubo yabakheneli banelisekile
Ukucebisa Inkqubo yabakhenkethi ilungiselelwe kakuhle
ISIZATHU SOKUTHENGA IXESHA
1. Unxibelelwano lwehlabathi
Sinikezele ngenkonzo yethu yokhenketho
Ngaphezulu kwe-50 kumazwe ehlabathi ukusukela nge2012
2. Ukoneliseka komthengi
Ileta evela eSaudi Arabia Royal
Ileta evela eMexico Goverment
3. Udumo oluhle kumashishini okhenketho eKorea
Imisebenzi yeGalelo leNtlalo
Ukuphucula uBomi baBantu abahlelelekileyo: Abasebenzi be-Etourism bazinikele ekuphuculeni ubomi babahlelelekileyo ngokuhambisa i-briquette kumasango abo angaphambili ngethemba lokuba baya kuba nobusika obufudumeleyo.
Uncedo lwaBantu abaKhubazekileyo: Ngosuku lwehlabathi lwaBantu abaKhubazekileyo, i-Etourism yanikela ngemali kwiziko lendawo.
Umrhumo woPhuculo loLutsha: I-Etourism iyavuma ukubaluleka kokuphuhliswa kolutsha kwaye yanikela ngemali kwiYeongdeok County ukuxhasa inkqubo yemfundo.
Ilayisensi / isiqinisekiso
IArhente yokuHamba esemgangathweni yeSewoul
KATA iiAgentt zokuHamba eziHamba
Isatifikethi sokuqondwa komgangatho
Ama-26 eeMbasa zoNyaka eziHamba ngeHlabathi
I-DMC yaseKorea ehamba phambili kwi-DMC ka-2019
UMphathiswa Wezenkcubeko, ezemidlalo nezokhenketho
Wamkelwe njengoMsebenzi oGqwesileyo wabakhenkethi
ngu-KATA (Umbutho waseKorea Wabahambisi beehambo)
Umgaqo-nkqubo woxanduva lokuSebenza ngeTekhnoloji